दु:खद खबर मोरङमा एकै परिवारको ४ जनाको घरभित्र आगो लगाइ हत्या ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > दु:खद खबर मोरङमा एकै परिवारको ४ जनाको घरभित्र आगो लगाइ हत्या !
काठमाडौं । के मेरो, आमा, दाजु—भाउजु र दिदी मारिनै पर्ने व्यक्ति थिए त ? हामीले न्याय कहिले पाउने ? प्रहरीले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेपछि गृहमन्त्रालय लाग्नु पर्दैन ? अव कहाँ गएर न्याय खोज्ने ? यी लगातार प्रस्न थियो इन्दिरा राईको । उनी संकास्पद हत्या प्रकरणमा परेकी ८६ बर्षिय गंगामाया राईकी छोरी हुन् ।
काठ(सखुवा)को २५ खम्बा भएको, बाँसको सेन्टरवेरा र जस्ताको छानो भएको दुई तले घर थियो । त्यो रात घरको चारैतिरबाट एक्कासी आगो लागेको छिमेकीहरूले देखे । छिमेकीहरू त्यहाँ पुग्दा आधा जाति घर जलिसकेको थियो । दमकल आइपुग्दा करिव डेढ करोडको धनपम्पति जलिसकेको थियो । सम्पति त जल्यो जल्यो चार जनाको शव आधा जलेको अवस्थामा रगताम्य भेटियो ।
किन परिवारैको हत्या गर्नु प¥यो ?
मृतक चन्द्रकुमार राई २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनको वडा अध्यक्ष चलाएका व्यक्ति थिए । समाजमा नेतृत्व कर्ता नै थिए चन्द्र । घरैमा किराना व्यवसायी चन्द्रको गाउँमा प्राय सवैसँग मेलमिलाप थियो । आमा गंगामाया र बहिनी विष्णुको मात्र हत्याहुदा चन्द्रकुमारले छाड्ने थिएनन् । अपराधि उम्किन मुस्किल पर्ने हुनसक्थ्यो । त्यही भएर आमा गंगा, छोरी विष्णुसहित चन्द्र र उनको पत्निको एकसाथ हत्या भएको हुनसक्ने पीडितहरूको दावी छ ।
कहाँ कहाँ भयो उजुरी ?
त्यो घट्ना हुदा इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीमा इन्स्पेक्टर राजन कार्कीको नेतृत्व थियो । त्यहा उजुरीको साथै घट्ना हुनसक्ने कारणहरू र सम्भावित पात्रहरूको बारे सवै सूचनाहरू उपलब्ध गराएपनि राजनले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेको पीडित इन्दिरा राईले गुनासो गरे । पथरी प्रहरीमा राजनसहित तीन पटक इन्स्पेक्टर परिवर्तन भइसकेको छ । सवै प्रहरी प्रमुखलाई घट्नाका राम्रो अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्दै आएपनि खास वास्ता नभएको पीडित परिवारको गुनासो छ । चार—चार जनाको मृत्यु भएपनि प्रहरीले संकास्पद व्यक्तिहरूलाई प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको रामकुमार राईको पनि गुनासो छ । इलाका प्रहरी कार्यालय त्यसवेला आवश्यक अनुसन्धान नगर्नुमा राजनीतिक साइनो र पैसाको चलखेल हुनसक्ने पीडित परिवारको संका छ ।
पीडित परिवारले जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, प्रदेश प्रहरी कार्यालय मोरङ, संघीय प्रहरी कार्यालय सनुसरी, १ नम्बर प्रदेश गृह, नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय र नेपाल मानव अधिकार आयोगमा उजुरीसहित प्रभावकारी अनुसन्धानको लागि लिखित अनुरोध गरिएको पीडित रामकुमार राईले बताए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई निवासमै गएर घट्ना प्रकृति बताएपनि मन्त्रालयको आवश्यक चासो नदेखिएको इन्दिरा राईको गुनासो छ ।
परिवारले उजुरी मात्र दिएका छैनन् । घट्ना स्थालमै २०७४ अशोज २९ गते पत्रकार सम्मेलनको गरेर संकास्पद हत्याको बारे आम जनतालाई जानकारी गराएका थिए । करिव एक बर्षपछि बिहिबार (२०७५ अशोज १८) रिर्पोर्टस क्लव काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पत्रकार, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, गृह मन्त्रालय, मानवअधिकारवादी संगठनहरूसँग घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धानको फेरि माग गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा ३ नम्बर प्रदेस सभासदस्य देवकी राई(श्रेष्ठ), किरात राई यायोक्खा पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष दुर्गा राई, इन्दिरा राईको पति चन्द्रकुमार हतुवारी, मृतक चन्द्रकुमार राईको छोरा र छोरीलगायतको उपस्थिति थियो ।
इन्दिरा दोहो¥याइ, तेह¥याइ भन्छिन ‘घट्ना नियोजित हत्या हो, किन प्रभावकारी अनुसन्धान हुदैन ?’ फेरि भन्छिन ‘प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अपराधिलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने हाम्रो माग छ ।’ अनुसन्धान राम्रो नहुदा परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई समेत जोखिम बढ्दै गएको छ । तत्काल सम्भावित अपराधी पक्राउ गर्न सरकार वा सम्बन्धीत निकायसँग इन्दिराको माग छ । चन्द्रकुमारको दुई छोराछोरीले एकै साथ मामाबाबु गुमाएका छन् । घट्नाको छानविन गरी ती निर्दोष टुहुराहरूको लागि क्षतिपूर्तिको समेत माग गरेका छन् पीडित परिवारले । हाइ गुहार कतैबाट पनि नपाए, प्रभावकारी छानविन नभए आमरण अनसन, बन्द हड्ता जस्ता अप्रियबाटो लिन बाध्यहुने पीडित इन्दिराको चेतावनी छ ।
राजधानीमा एकै दिन ६२ जनाको ह’त्यापछि सरकारले गर्यो आपतकालीन घोषणा
प्रेम विवाह गरेको ५ महिनामा परिवारकै कारण श्रीमानले छोडेर हिडे , पेटको बच्चा फाल्न भिनाजुले औषधी खुवायो (भिडियो हेर्नुस्)
अब सरकारी जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नत्र तलब रोक्का हुने : पूरा हेरि शेयर गरौ